Baro adeegsiga sawirada vector | Abuurista khadka tooska ah
Adeegsiga sawirada vector
Jorge Neira | | Khayraadka, Kaararka kartoonka
Sawirada vector Iyagu waa ilo ka mid ah adduunka naqshadeynta. Ugu dambayntiina waxay keenaan a qalab cusub taasi waxay u oggolaanaysaa naqshadeeyaha inuu yeesho faa'iidooyin taxane ah markuu fulinayo shaqadiisa ganacsi. Intaa waxaa dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad shaqeeya oo ku saleysan tijaabo iyo qalad, taasi waa, laga bilaabo qadar badan oo isku day hore ah.
Feektoor waa nooc, Naqshad hore oo ah qaab gaar ah, oo ka kooban kumanaan xariiqyo xaddidan iyo dhibco taas u oggolow naqshadeeyaha inuu si sax ah u siiyo tusaalaha la doonayo. Astaamahani waxay ka jawaabaan qaabab xisaabeed, taas oo u oggolaaneysa naqshadeeyaha inuu sameeyo tallaabooyin aad u gaar ah markii la samaynayo astaamaha. Sidoo kale, dulinka ayaa dib loo naqshadeyn karaa inta jeer ee uu naqshadeeye u arko inay lagama maarmaan tahay.
1 Baro adduunka fallaadhaha
2 Dhaqdhaqaaqa ku raaxeysanaya fiiqnaanta iyo qadarinta muuqaalka sare
3 Faa’iido darrooyinka vector-ka
Baro adduunka fallaadhaha
Vectors waxaa lagu abuuray softwares ku dhiirrigeliyay iyaga qaabeynta. Kuwani waxay oggolaadaan wax ka beddel dulinka dulucda naqshadeeyayaasha, oo ku siinaya ikhtiyaarro ikhtiyaari ah oo naqshadeyn ah oo loogu talagalay shaqadaada, taas oo aan ka wada hadli karno cabbirka, hooska, midabada iyo hooska.
Vectors, kheyraad ahaan, waa la heli karaa taxane ah oo faa'iidooyin u ah naqshadeeyaha iyo yaa noqon kara waxyaabaha soo socda:
Isticmaalka faylal khafiifa, u oggolaaneysa naqshadeeyaha inuu si caddaalad ah u maareeyo faylka. Tani waxay noqon kartaa faa iidada hal abuurka leh ee gudaha adduunka naqshadeyntaWaa wax iska caadi ah in lala kulmo softiweerro keena natiijooyin tiro badan oo mashaariic culus ah, iyo macnahaas oo ah, mid daallan oo lagu keydinayo ama lagu gelinayo bog.
Beddelaadda kuwan waxay noqon kartaa mid toos u gala shuruudaha nidaamka isku mid.
El naqshadeynta moodelladaha vektorka wax u dhimi doonin tayada sawirka wakhti kasta, markaa naqshadeeyaha wuu awoodi karaa faahfaahin ka fiirso tixgelinta aad u aragto inay lagama maarmaanka tahay, tan, iyada oo ay ugu wacan tahay go'aannadeeda madax-bannaan.
Thanks to qaabkeeda, vectors-ka waa la beddeli karaa Iyadoo aan dhibaato weyn laga helin qalabka dhiirrigelinta qoraalka, taas oo u oggolaaneysa naqshadeeyaha inuu wax ka beddelo qoraallada vector-ka iyada oo aan dhibaato weyn laga gaarin tayadiisa.
U oggolow in laga shaqeeyo sawirro faahfaahsan, taas oo u oggolaaneysa naqshadeeyaha inuu xoojiyo xallinta sawirka laftiisa.
Dhaqdhaqaaqa ku raaxeysanaya fiiqnaanta iyo qadarinta muuqaalka sare
Alaabtaada ugu dambeysa, fallaadhiyeyaashu waxay leeyihiin fiiqan iyo qaddarin muuqaal oo sarreeya, ka dhashay wax soo saarka fiican ku saabsan falanqaynta iyo qadarinta muuqaalka ah.
Animation gudahood, waa qalab aad loogu taliyay, iyo sidoo kale bandhigyada, mahadsanid xaqiiqda ay natiijooyin adag, oo la taaban karo mar faahfaahinteeda. Hadda, sida ay jiraan faa'iidooyin, sidoo kale waxaa jiri doona khasaaro taxane ah, kuwaas oo noqon kara kuwa hoos lagu soo bandhigay.
Faa’iido darrooyinka vector-ka
Suura gal maaha maaraynta gallery iyo wax soo saarka jpg files iyo faylalka rasta.
Qaabkeeda darteed, waafaqsanaantu waa mid ka mid ah qodobada ugu waawayn ee taban of vectors, taas oo ah dhibaato weyn marka lala shaqeynayo vectors, ku talinaysa markaa in la helo software u dhigma iyaga.
Dib u dhis Sawirada Vector awooddo waqti qaadasho marka loo eego barnaamijyada kale ama qaababka laga dhex shaqeeyay aagga. Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda in qayb kasta oo ka mid ah vektorka ay tahay in lagu dhiso aasaas adag, taas oo tilmaamaysa xisaab badan oo xisaabeed oo ku kalifay siiyaan saxsanaanta tusaalaha dulinka
Suura gal maaha sameynta falanqaynta nooca hawada ah, iyo sidoo kale miirayaasha geesoolayaasha.
Hawlaha xisaabeed ee ay tilmaamayso waxay noqon karaan kuwo isku murugsan kuwa gudaha ku jira isku raacsan aragti ahaaneed ee aagga naqshadeynta ama goob kasta oo la dhammeeyo.
Si xoog leh u yareynta sawirka waxay sababi kartaa in la waayo mid ka mid ah saldhigyada qaabdhismeedka dulinka, sida ay noqon karto khadadka ay leedahay.
Natiijooyinka fallaadhaha noqo ilo ka mid ah aagga naqshadeynta, taas oo, sida khayraad kasta, ay ku lug leedahay taxane ah faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka in, sida saxda ah loo isticmaalo, la imaan karto qalab fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Adeegsiga sawirada vector
Juan | beddel astaamaha dijo
Sidoo kale maskaxda ku hay in astaamaha badanaa loo baahan yahay in loo adeegsado cabbirro kala duwan, sidaa darteed waa fursad wanaagsan in si buuxda looga faa'iideysto dabeecadda la miisaami karo ee sawirada vector-ka si loo abuuro muuqaal aad u qurux badan oo ujeeddooyin badan loo isticmaali karo.
Intaa waxaa sii dheer, baakadaha softiweerka ee softiweerka ah sida Adobe Illustrator, qaab kasta, gradient, iyo istaroog sameeya astaanta waa la beddeli karaa lana beddeli karaa wakhti kasta, si ka duwan naqshada ku saleysan pixel ee loo baahan yahay in dib loo hagaajiyo markii isbeddellada la sameynayo.
Qaadashada koorso aasaasi ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo softiweerkan ayaan kaa caawin doonin oo keliya inaad xalliso waxyaabaha fudud daqiiqadda ugu horreysa, laakiin waxay kuu badbaadin doontaa lacag, howsha waxaad baran doontaa inaad si wanaagsan u isticmaasho.
Jawaab Juan | beddel astaamaha
Naqshad loogu talagalay macaamiisha ama naqshadeynta naqshadeeyayaasha?
Ma tahay naqshadeeye ka fiican inta qaaliga ah ee aad soo dalacdo?